कोरोनाभाइरस अर्थतन्त्र : मन्दी वा डिप्रेशन ? अर्थशास्त्री भन्छन-‘ग्रेटर डिप्रेसनको
अर्थशास्त्रीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोप र विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक मन्दीको गम्भीर चेतावनी दिएका छन् । किनभने कोरोनाभाइरस नियन्त्रण प्रणालीले विश्वको अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण क्षेत्रहरू प्रभावित भएका छन् ।
कतिपयले त यसलाई सन् १९२९मा शुरू भएको महान उदासीपना (ग्रेट डिप्रेसन) सँग कोरोना भाइरसको वेग र तीव्रतालाई तुलना गरेका छन् । के हामी मन्दीलाई हेरिरहेका छौं ? वा डिप्रेसन ? र वास्तवमा के फरक छ?
मन्दी के हो ?
आर्थिक मन्दीलाई परम्परागत रूपमा लगातार दुई चौथाई वा छ महिनाको नकारात्मक आर्थिक वृद्धिको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । अमेरिकी आर्थिक अनुसन्धान राष्ट्रिय ब्यूरो ( NBER ) ले गरेको परिभाषा अनुसार आर्थिक मन्दी आर्थिक गतिविधिमा यस्तो गिरावट हो जो केही महिना वा त्यो भन्दा बढी समय चल्न सक्छ । जो सामान्य रूपदेखि वास्तविक जीडीपी, वास्तविक आम्दानी, रोजगार, औद्योगिक उत्पादन र थोक तथा खुद्रा बिक्रीमा पनि देखिन्छ भनेको छ ।
NBER को ‘वास्तविक’ को अर्थ के हो ? जीडीपी भनेको के हो?
वास्तविक भनेको “मुद्रास्फीतिको लागि समायोजित’ हो । जिडिपी भनेको समग्र घरेलु उत्पादन हो । निश्चित समयसीमा भित्रको अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित सबै चीजहरू र सेवाहरूको मानको मापन जिडिपी हो । त्यसोभए किन हामी एनबीईआरले भनेका ख्याल राख्छौं ? किनभने एनबीईआरले आर्थिक गतिविधिको उचाई र सतहहरू (व्यापार चक्रलाई) दृष्टिकोण दिन्छ । यसले वास्तवमा मन्दी कहिले हुन्छ भनेर निर्धारण गर्न मापन गर्दछ । हुन त NBER सरकारी निकाय होइन, यो एक निजी, गैर नाफामुखी, गैर पक्षपातीय अनुसन्धान संगठन हो । यसले वास्तवमै चाखलाग्दो काम गर्ने कागजातहरू पनि प्रकाशित गर्दछ । जस्तै यसले सन् १९०० को दशकको स्पेनिश फ्लू महामारीको जस्तै कोरोनाभाइरसबाट हुने आर्थिक नतिजाको बारेमा बताउन सकिन्छ भनेर जाँच्दछ ।
त्यसोभए मन्दी कति लामो हुन्छ ?
यो भर पर्छ । एनबीईआरको परिभाषा अनुसार मन्दी कति लामो हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्न । मन्दी न्यूनतम ६ महिना रहन्छ भन्न पनि सकिदैन । किनकी केही मन्दीहरु वर्षौसम्म जारी रहेका उदाहरणहरु पनि छन् । अमेरिकामा ग्रेट मन्दीको नाम दिइएको मन्दी सन् २००८ मा शुरु भएर जुन २००९ सम्म चलेको थियो । यो मन्दी १८ महिना चलेको थियो । नाइजेरियामा सन् २०१६ शुरुमा एउटा पुस्ता पहिलो मन्दीमा फस्यो र २०१७ को दोस्रो चौमासिकसम्म त्यसबाट माथि आउन सकेनन् ।
कुन कुराले ठूलो मन्दीलाई ‘महान’ बनायो?
अमेरिकामा सन् २००८ मा शुरु भएर जुन २००९ सम्म चलेको ‘ग्रेट’ मन्दीले त्यो मोनिकर (उपनाम) कमायो किनभने सन् १९२९ को ग्रेट डिप्रेसन पछिको महामन्दीबाट अमेरिकी अर्थतन्त्रले अनुभव गरेको सबैभन्दा नराम्रो संकट थियो । यो नाम उपयुक्त पनि ठहरियो किनकि यो अमेरिकाले अनुभव गरेका १७ मन्दीहरूमा सबैभन्दा लामो समयसम्म चलेको थियो । जसलाई अमेरिकाले अहिलेसम्म महसुस गरिरहेको छ ।
त्यसोभए डिप्रेसन भनेको के हो?
‘डिप्रेसन’ को लागी कुनै तय परिभाषा छैन, तर जब एक देश लामो समयको आर्थिक मन्दीको साथ सामना गर्दै छ । जुन चौथाईमा (क्वार्टर) मा भन्दा वर्षमा मापन गरिन्छ । तब तपाई निश्चित हुन सक्नुहुन्छ कि यो डिप्रेसनमा छ । महामन्दी, उदाहरणका लागि, सन् १९२९ देखि सन् १९३९ सम्म १० वर्ष चल्यो ।
के कोरोनाभाइरस महामारी मन्दीतर्फ लक्षित छ ?
धेरैजसो अर्थशास्त्रीहरु यो दृष्टिकोणको वरिपरि आएका छन् । गत हप्ता, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यो वर्ष यो नकारात्मक विश्वव्यापी वृद्धिको प्रक्षृपण गरेको छ र भनेको छ कि हामी ‘विश्वव्यापी वित्तीय संकट वा झन्झन् खराबको रूपमा कम्तीमा खराब मन्दी’ सामना गरिरहेका छौं भनेर चेतावनी दिएको छ ।
धेरै वालस्ट्रिट अर्थशास्त्रीहरूले पनि सम्भावित मन्दी देखेको बताएका छन् । गोल्डम्यान साक्सको विचारमा अमेरिकी आर्थिक उत्पादन अप्रिलदेखि जुनसम्म एक बर्षको तुलनामा २४ प्रतिशत कम हुन सक्छ र बेरोजगारी दर आगामी महिनामा ९ प्रतिशतमा पुग्न सक्छ । क्यापिटल इकोनोक्सिले दोस्रो त्रैमासिक अमेरिकी आर्थिक बृद्धि एक वर्षको तुलनामा ४० प्रतिशत झरेको र बेरोजगारी १२ प्रतिशतमा झरेको देखिएको छ ।
के डिप्रेशनतर्फ जाँदैछौ ?
भविष्यमा के हुन्छ भनेर निश्चित रूपमा कसैले भन्न सक्दैन । केही अर्थशास्त्रीहरु भन्छन् कि आर्थिक गतिविधिले यस वर्षको दोस्रो ६ महिनामा फेरि उचाई लिनेछ । तर, यो सरकारी प्याकेजहरुमा निर्भर हुन सक्छ, जब कोरोनाभाइरस संकट चुचुरोमा छ र अन्य कारणहरु पनि छन् ।
किन ‘कोरोनाभाइरस’ र ‘डिप्रेशन’ शब्दहरू एकसाथ सुनिदै छ ?
जब तपाईं ‘कोरोनाभाइरस’ सँगसँगै ‘डिप्रेसन’ भन्ने शब्द सुन्नुहुन्छ वा पढ्नुहुन्छ, यो विश्लेषकहरूले सामान्यतया १९२९ मा भएको आर्थिक मन्दीको अचानकपन र गम्भीरतासँग तुलना गरिरहेका हुन्छन् ।
वित्तीय संकटका दिग्गजहरू के सोच्दछन् ?
सन् २००६को प्रारम्भमा २००८ को आर्थिक संकटको बारेमा चेतावनी दिने अर्थशास्त्री नौरिएल रउबिनी यस वर्षको अन्तमा पुनः सुधारको सम्भावना नभएको ठान्छन् । प्रोजेक्ट सिन्डिकेटका लागि स्तम्भमा, रौबिनी उर्फ ‘डा डूम’ ले तर्क गरे कि उन्नत अर्थतन्त्रहरूमा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रियाहरू महामारीलाई समेट्नको लागि आवश्यक पर्ने भन्दा कम भएको छ र वित्तीय प्याकेजहरू“न ठूलो र न तीव्र छ’ परिस्थिति सिर्जना गर्नका लागि । सुधार समयमै पुन प्राप्तिका लागि । यी कारणहरूको लागि, उनी भन्छन, ‘नयाँ ठूलो उदासीनताको जोखिम, पहिलेभन्दा पनि नराम्रो (एक ग्रेटर डिप्रेसन को जोखिम बढ्दै छ ।’
अर्कोतर्फ, २००८ को आर्थिक संकटबाट अमेरिकी अर्थव्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने पूर्व संघीय रिजर्व अध्यक्ष बेन बर्नान्केले व्यापार समाचार नेटवर्क सीएनबीसीलाई भने कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था कोरोनाभाइरसबाट सामना गरिरहेको अहिलेको झटका ‘ठूलो हिमपात वा प्राकृतिक प्राकृतिक प्रकोपको नजिक छ । यो सन् १९२९ शैलीको डिप्रेसन हो ।’– प्याट्रिसिया सबगा (अलजजिरा)